उनले फेरि पढ्न सुरु गरे। दर्शकदिर्घाका सबै अकमक्क परे। तीमध्ये म पनि एक थिएँ। दुई हरफजति पढेपछि सायद उनलाई लाग्यो, दोहोर्याएर पढ्दैछन्। उनी अत्तालिए र हतार-हतार गोजीमा भाषण राखेर 'सरी' पनि नभनी मञ्चमा पुन:गएर बसे।
छेउमा बसिरहेको भुटानी पत्रकार साथीले जिस्क्यायो, 'तिमीहरुको मन्त्री त पढ्दैन कि क्या हो?'
'यस्तै हो, हतारमा हुन्छ,' हाम्रा सबैजसो नेताका विदेश भ्रमणका कुरा उनले यसरी नै टारे।
त्यो बेला म दी हिमालयन टाइम्स दैनिकमा काम गर्थें। जलवायु परिवर्तनको समाचारभित्र बोल्ड गरेर 'मन्त्रीले दुईपटक एउटै भाषण गरेर लाजमर्दो पारे' भनेर पनि लेखेँ। समाचार पहिलो पृष्ठमा छापियो हाइलाइटसहित।
कृष्ण ज्ञवालीजी धेरै समय मसँग रिसाउनुभयो। 'मानवीय गल्तीलाई यसरी लेख्न जरुरी थिएन' भन्ने उहाँको तर्क थियो। मैले त्यो 'मानवीय गल्तीभन्दा मन्त्री र तपाईंहरुको गल्ती हो' भनेँ। दुई प्रति नै भाषण झुक्किएर परेको थियो भने पनि मन्त्रीले कम्तीमा धन्यवाद भनिसकेपछि भाषण सकियो भन्ने त बुझ्नुपर्ने हो। उनले त्यो भाषण एकपटक पनि पहिला हेरेजस्तो देखिएन, नभए त्यति त थाहा हुनुपर्थ्यो। मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि गल्ती देखियो। कसरी दुई प्रति भाषण मन्त्रीलाई दिइयो त?
नेपालको सामाजिक सञ्जाल यो विषयमा दुई भागमा विभाजित छ। एकथरि मान्छे 'अंग्रेजी हुनेखाने, राम्रो अंग्रेजी स्कुलमा पढेकाले बोल्ने हो, अब गाउँबाट आएका, संघर्षमा जीवन बिताएका गोकर्ण विष्ट वा अरु राजनीतिमा लागेका मान्छेले टुटेफुटेको अंग्रेजी बोल्दा रोइलो किन' भनिरहेका छन्।
अर्काथरि चाहिँ 'नजान्ने भएपछि किन बोलेको? खुरुक्क नेपालीमा बोले भइहाल्थ्यो, देशको बेइज्जत गरे' भनिरहेका छन्। कतिले 'विदेशीले नेपाली टुटेफुटेको बोल्दा केही नहुने, हामीले चाहिँ अंग्रेजी फरर बोल्नुपर्छ भन्ने के छ?' भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्।
कोटको गोजीमा हालेको भाषण भोलिपल्ट त त्यो शब्द पनि समेटिएर आइपुग्यो। प्रधानमन्त्रीको गोजीबाट त्यो भाषणमा परिवर्तन गराउने को हो भन्दै वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी मुर्मरिएको मैले नै देखेँ। 'प्रधानमन्त्रीकै भाषण रातारात परिवर्तन भयो, अब के कुरा गर्नु' भनेर एक जना कर्मचारी निराश भएर मलाई सुनाउँदै थिए।
नेपालमा अंग्रेजी हुनेखानेले बोल्ने, इलिटको भाषा भनिन्छ। राजनीतिक रुपमा वामपन्थी सोचमा विश्वास गर्नेहरुले त अझ प्रचण्डजीहरुकै भाषामा 'यो सुकिला मुकिलाको हो' भन्ने बढी देखिन्छ। पक्कै पनि अंग्रेजहरुको भाषा भएकाले यसको राजनीतिक अर्थ पनि होला तर त्यो सबैबाहेक यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। यसलाई राजनीतिकरण नगरिकन हेरौं।
हामी धेरैजसोलाई 'इंग्लिसफोबिया' पनि छ। अंग्रेजीदेखि डराइहाल्ने। अात्तिहाल्ने। त्यसको एउटा कारण विद्यालयमा तर्साएकाले पनि हो।
पुष-माघको विदामा म पर्वत जाँदा मेरो खोजी हुन्थ्यो। म घर आएको थाहा पाएपछि स्कुलका हेडसर पनि खोज्दै आएर 'ल है अब १० कक्षालाई अंग्रेजी पढाइदिनुपर्यो' भन्ने। म ‘फेवल्स अफ एसप’ देखि सबै कथा फर्रर सुनाउँथेँ। गुलमोहर किताब पढेर गएको मलाई १० कक्षाको अंग्रेजी खास गाह्रो लाग्दैनथ्यो। पाँच कक्षामा पढ्नेले १० कक्षाको किताब फर्रर सुनाउँदा र अंग्रेजी पनि बोलेको देखेर मेरा गाउँका दाइदिदी अचम्म मान्थे। ट्वाल्ल परेर हेर्थे।
चिट चोराउन अंग्रेजी शिक्षक नै टेस्ट र एसएलसीको केन्द्र परेको ठाउँमा तैनाथ हुन्थे। मलाई पनि त्यो टोलीमा सामेल गर्थे। मैले पनि एक-दुईपटक त्यसरी चिट लेखेर पठाइदिएको छु। सानो ढुंगामा कागज बेरेर झ्यालबाट फाल्थ्यौं। जसले पाउँछ उसैले टिप्छ। अनि आफूले लेखेपछि परीक्षार्थीले अर्कोलाई पास गर्दै जान्थ्यो।
त्यसरी अंग्रेजी पढेका वा अंग्रेजी बुझेका धेरैलाई यो विषय भयंकर लाग्छ। सबै कुरा जान्नुपर्यो भने जुन भाषा पनि गाह्रो हुन्छ। सबै कुरा बुझ्न सजिलो छैन। तर अंग्रेजीको भूतले धेरै नेपालीलाई तर्साइरहन्छ। हाम्रा धेरैजसो मन्त्रीले त्यही भूतरुपी अंग्रेजी शिक्षा पार गरेर आएकाले यसलाई 'क्लास' कै रुपमा लिएको पाइन्छ। त्यसैले उनीहरू धेरैपटक समस्यामा परेका छन्।
उनीसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु। धेरैपटक भेटेको छु। उनीजस्ता उदाँउदा राजनीतिज्ञले यसरी आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति फितलो बनाउन हुँदैनथ्यो। उनले मात्र होइन, हाम्रा कतिपय नेताले तयारी नगरी बोल्दा दुःख पाएका छन्। आज सबैका हातहातमा मोबाइल छ। इन्टरनेट पहुँच छ।
जसले पनि नेताले बोलेका कुरा सार्वजनिक गर्न सक्छन्। त्यसैले ख्याल नगरी बोल्दा एउटै घटनाक्रमले पनि उनीहरूको राजनीतिक करिअरसम्म धक्का पुग्न सक्छ। हुन त हाम्रा नेता त्यति होस राखेर बोल्दैनन्। न हिजो के बोलेँ र आज के बोलेँ भन्ने हिसाब नै गर्छन्। तर, नेताहरूले अब आफ्ना बोलीबारे ध्यान दिनैपर्ने जरुरी छ।
महानिर्देशक रिसले आगो भएर गाली गरेर इमेल फर्काएछन्। खासमा उनले 'कमेन्डेबल' भनेको भ्रष्ट भन्ने बुझेछन्। जबकि ती महिलाले 'तपाईंले गज्जब गरिरहनुभएको छ' भनेकी थिइन्। त्यति सामान्य कुरामा उच्च तहका कर्मचारी त त्यस्तो अवस्थामा छन् भने अरुको के कुरा! मलाई यी कुरा विश्व बैंककी ती महिलाले नै सुनाइन्।
अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय फोरम‍मा यसको प्रयोग हुनु नौलो कुरा होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्मेलनमा उसले मान्यता दिएका अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
सबै सहभागीको हेडसेटमा चिनियाँ, फ्रान्सेली, रुसी, अरबी, स्पेनिस र अंग्रेजी भाषामा रिमोटले परिवर्तन गरेर सुन्न मिल्ने प्रविधि हुन्छ। तुरुन्तै यी भाषामा अनुवाद गरिन्छ र जानेको भाषामा सुन्न पाइन्छ। त्योबाहेकका भाषामा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुवादक राख्दैन।
धेरैले बोल्नुअगाडि 'साउन्ड थेरापी' गर्दैनन् जुन निकै जरुरी हुन्छ। जस्तो, आफ्नो बोल्ने पालो आउनुअघि बाथरूम वा एकान्त ठाउँ खोजेर एक मिनेट लामोलामो सास लिने, जिब्रो फट्कार्ने र कुकुरले जस्तो रोकीरोकी सास फेर्ने गर्नु राम्रो हुन्छ।
२०७५ असार २७ मा प्रकाशित